Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Fibre indhaha Shiinaha Fiber optical kordhiyo Factory
1550nm Mini indhaha kordhiyo (ZOA1550MA)
1.Baarka laser-ka ee qaybta muraayadaha iyo fiber-ka loo yaqaan 'er-doped fiber' ayaa laga keenaa USA. 2.Mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa wax soo saar koronto oo qumman oo lagu kalsoonaan karo, xasilinta wareegga iyo wareegga xakamaynta heerkulka meeriska heerkulka korontada oo la hubiyo waxqabadka ugu fiican ee mashiinka oo dhan iyo nolosha dheer ee xasilloon ee laser-ka 3. Mashiinka wuxuu ku dhex-shaqeeyaa software-ka microroprocessor, oo leh kormeerka gobolka leysarka, muujinta dhijitaalka ah, digniinta cilladda, maareynta shabakadda iyo shaqooyin kale. Mar para ...
Heerka Dhexe ee Helitaanka EDFA (ZOA1550MC)
Astaamaha 1.Adopts JDSU ama Oclaro pump laser 2.Adopts OFS fiber 3.SmT habka wax soo saarka si loo hubiyo cabbirka yar iyo kororka hooseeya, laakiin xasilloonida sare 4.Micro auto kormeeraha PCB 5. Soo saarista la hagaajin karo (-4 ~ + 0.5) 6. Max wax soo saar badan 23dBm (hal laser laser) sahayda owerka 5 Keyd No Xiriir ...
1550nm Erbium Doped Fiber kordhiyo ZOA1550HW
ZOA1550HW taxane awood sare leh oo ah habka kaliya ee EDFA waxaa lagu gartaa buuq hooseeya, xariijin sare. Dhisid-sifiican loo qabtay CWDM oo isku dhafan 1490nm / 1310nm qulqulka xogta laga soo xigtay OLT iyo ONU oo loo gudbiyo hal faybar iyada oo loo marayo EDFA, yareynta tirinta qaybaha iyo hagaajinta waxqabadka nidaamka iyo kalsoonida. Waxay bixisaa xal dabacsan, qiimo jaban oo loogu talagalay CATV aagga ballaaran ee ballaaran ee magaalooyinka waaweyn iyo magaalooyinka dhexdhexaadka ah. Taxanaha ZOA1550HW ku qalabeysan yahay dhameystiray APC, AGC, ATC gacanta, design aad u fiican ...
Erbium-doped fiber amplifier (EDFA), oo ay ugu wacan tahay qaylada isdaba-joogga ah (ASE) iyo qulqulka, isku-uruurinta qaylada isdaba-joogga ah, waxay si weyn u yareyn doontaa SNR-ka qalabka wax lagu aqbalo, sidaas darteed waxay xaddideysaa awoodda nidaamka iyo masaafada aan gudbinta lahayn. Jiilka cusub ee fiiq-fiiqista Raman (ZRA1550) wuxuu ku guuleysanayaa ballaadhinta aaladda isha iyadoo la adeegsanayo faa iidada ay soo saartay firidhsan Raman (SRS). FRA waxay leedahay nooc ballaaran oo faa'iido leh; bandwidth faa'iidada waxaa lagu sii ballaarin karaa th ...
Bannaanka Erbium-Doped Fiber kordhiyo ZOA1550W
Taxanaha ZOA1550W 1550nm Erbium Doped Fiber Amplifier (dibada) ayaa loogu talagalay arjiga la xareeyay, wuxuu qaataa 980nm ama 1480nm toosan oo toosan, go'doominta indhaha, DFB, heerkulka korantada ee DFB laser oo ay soo saartay JDS-U, Fujitsu, Nortel, Lucent, Fitel iyo kuwa kale shirkadaha adduunka ee caanka ah ee semiconductor sida isha bamgareynta. Gudaha mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa wareegga xasiloonida awooda korantada iyo qalabka qaboojiye ee leysarka, aaladda kontoroolka xasiloonida heerkulka si loo hubiyo in la doorto ...
Module Kordhinta Aragtida CATV
ZOA1550MB CATV EDFA module wuxuu qaadanayaa noocyada caadiga ah ee loo yaqaan 'Single Channel' iyo 'narrowband'. EDFA waxaa ka mid ah leysarka bamka qaboojiyaha, kormeeraha soo gelinta iyo soo-geliyaha kala-soocida, kormeeraha soo-saarka iyo soo-saaraha soo-saaraha, cabbirka is haysta 90X70X20mm. Isku xirnaan adeegsade saaxiibtinimo 30-pin ah ayaa lagu soo daray si ay awood ugu siiso aaladda in ay kula xiriirto korantada koontaroolka. Astaamaha (1) tayo sare leh: wuxuu qaataa laser laser pump 980nm sumad caalami ah, softiweerka ugu fiican ee awoodda, faa'iidooyinka iyo qaababka flatness, taas oo damaanad qaadaya NF hoose iyo ...
1550nm Erbium Doped Fiber kordhiyo ZOA1550H
ZOA1550H EDFA waxay korsataa JDSU, Lumics iyo shirkado kale oo semiconductor adduunka caan ka ah oo ah isha laga soo tuuro. Gudaha mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa soo saarida xasiloonida awooda korantada iyo qalabka qaboojiyaha heerkulka, heerkulka xakamaynta xasiloonida si loo hubiyo waxqabadka mashiinka ugu wanaagsan iyo xasiloonida nolosha dheer. Softiweerka kumbuyuutarka kumbuyuutarka ayaa kormeera gobolka shaqada ee 'laser', shaashadda VFD waxay soo bandhigaysaa xuduudaha hawlgalka. Marka xuduudaha hawlgalka laser de ...
1550nm Erbium Doped Fiber kordhiyo ZOA1550
Sharaxaadda sheyga ZOA1550 taxanaha awoodda hagaajisa ee loo yaqaan 'ERbium doped fiber kordhiyaha' waxaa si gaar ah loogu talagalay shabakadaha CATV. Sababtoo ah dhererka dhererka EDFA ee 1550nm, iyada oo la ilaalinayo fareebka luminta hooseeya, iyo tiknoolajiyaddiisa ayaa ahayd mid qaan gaar ah, si ballaaran ayaa loo isticmaalaa. Waxaan qaadaneynaa JDSU, Fitel iyo shirkad kale oo caan ah oo semiconductor ah oo soo saartey 980nm ama 1480nm pump, kaas oo leh xarriiq sare, go'doomin indhaha ah, jawaab celin la qeybiyey, qaboojiye heer kulliye DFB. EDF ...